Lalao PC 20 tsara indrindra amin'ny fanaraha-maso | la-manette.com
Lalao PC 20 tsara indrindra amin'ny fanaraha-maso
6 février 2021 feh Mathilde Grimard
Mety toa mifanohitra amin'izany, fa ireo lalao ireo PC dia tsara kokoa raha mampiasa gamepad ianao fa tsy ny totozy sy ny klavier taloha.
Mety ho an'ny maro ny firafitry ny klavier-mouse lalao pc, fa intuitive ny mampiasa controller ho an'ny karazana manokana toy ny lalao lalao. fanatanjahan-tena, anaram-boninahitra hazakazaka sy lalao miady. Samy manana ny tombony sy ny fatiantoka ny rafitra fanaraha-maso, arakaraka ny fomba lalao ataonao amin'ny fotoana rehetra.
HAFA: Ny 10 tsara indrindra PC gaming configurations
Tsy misy mpitifitra olona voalohany (FPS) dia tsy ao anatin'ity lisitra ity, satria (azo inoana fa) mora kokoa ny milalao amin'ny klavier sy totozy. Raha lazaina izany dia nohavaozinay ity lisitra ity miaraka amin'ny anaram-boninahitra 5 hafa izay tsara indrindra amin'ny fampiasana controller, mifanohitra amin'ny totozy sy fitendry.
Ny ankamaroan'ny lalao console amin'izao fotoana izao dia mirona amin'ny PC, ary ny lohateny sasany dia mora kokoa ny milalao miaraka amin'ny controller fa tsy miaraka amin'ny fitambaran'ny klavier sy ny totozy. Na inona na inona fanovana fidinao, dia ny fanao no mahatonga ny fahatanterahana; Noho izany dia mety ho sarotra ny hifindra avy amin'ny klavier sy ny totozy mankany amin'ny mpanara-maso rehefa avy nandany ora am-polony tamin'ny voalohany. Inona no lalao PC tokony ho lalaovina amin'ny controller? Nampiana ity lahatsoratra ity mba hampidirana lohateny fanampiny vitsivitsy.
Yakuza 0 tsy manafina ny zava-misy fa natao ho za-draharaha amin'ny controller. Ny iray amin'ireo zavatra voalohany ataon'ny lalao dia ny famoahana fampitandremana izay manolotra izany. Ny klavier sy ny totozy dia tokony ho tsara ho an'ny fikarohana sy ny ankamaroan'ny lalao mini, fa ny mpanara-maso dia mety kokoa amin'ny ady karazana beat-'em-up.
Yakuza 0 dia lalao an-tsarimihetsika misokatra mahafinaritra miaraka amin'ny tantara mahatsikaiky izay fampidirana tsara amin'ity andiany efa ela ity. Koa makà mpanara-maso ary midira ao amin'ny kiraron'i Kiryu sy Majima.
HAFA: Zavatra 10 tokony ho fantatra alohan'ny hanombohana ny lalao Yakuza 0
19- Psychonaut 2
Ny Psychonauts 2 dia azo jerena ho solon'ny lalao sehatra amin'ny ankapobeny, indrindra fa ny 3D. Amin'ny ankapobeny, ireo lalao ireo dia mahazo tombony amin'ny hetsika mazava kokoa omen'ny hazo analogue, raha toa kosa izy ireo amin'ny ankapobeny dia natao hampiasa ny bokotra amin'ny mpanara-maso araka izay azo atao.
Ny Psychonauts 2 dia manao dingana lavidavitra kokoa amin'ny fampidirana rafitra fiadiana izay mitaky reflexes haingana sy ny fampidirana kodiarana herinaratra psi, singa roa izay tsapa tsara indrindra amin'ny controller.
18- Ligy rocket
Miaraka amin'ny fanazaran-tena ampy, na iza na iza dia afaka mifehy ny rafitra fanaraha-maso; na izany aza, mila ora vitsy kokoa ny sasany. balafomanga League miasa tsara amin'ny fitendry sy totozy toy ny amin'ny fanaraha-maso, fa ny ankamaroan'ny olona dia mirona mankany amin'ny faharoa noho ny lovan'ny lalao ho lohatenin'ny console.
Ankoatra izany, ny fiara Rocket League dia voahidy tanteraka miaraka amin'ny mpanara-maso satria, amin'ny farany, ny klavier iray dia tsy afaka mifanandrify amin'ny fahalalahan'ny 360 ° amin'ny hazo analogue. Ny mpanara-maso dia ambony ihany koa amin'ny lalao an-habakabaka, izay tena zava-dehibe amin'ny Ligy Rocket.
HAFA: Torohevitra sy fika tsara indrindra amin'ny ligy rocket ho an'ny vao manomboka
17- Monster Hunter World
Rehefa milalao Monster Hunter World amin'ny PC, ny safidy fanaraha-maso tsara indrindra dia miankina amin'ny fananganana ny toetra. Raha toa ianao ka milalao amin'ny maha-mpiady amin'ny ranged, ny klavier sy ny totozy amin'ny ankapobeny dia aleo kokoa satria mamela ny tanjona mazava kokoa. Mifanohitra amin'izany, ny controller dia mandaitra kokoa ho an'ny mpiady amin'ny melee, indrindra amin'ny resaka combos rojo.
Vakio ihany koa: Gamepads PC tsara indrindra tamin'ny 2020
Monster Hunter dia nanomboka ny fiainana tamin'ny consoles, ary io lova io dia misy fiantraikany amin'ny World. Ireo lalao ireo dia noforonina miaraka amin'ny mpanara-maso ao an-tsaina, na dia nanao asa tsara aza i Capcom tamin'ny fanaovana ny klavier sy ny totozy ho safidy azo antoka.
Tranga iray hafa izay somary ara-toe-javatra, i Hades dia tsara kokoa amin'ny mpanara-maso matetika. Ny fitaovam-piadiana sasany (Adamant Rail) dia tsara kokoa miaraka amin'ny fitendry sy totozy, indrindra ho an'ireo mpilalao te hanala ny tanjona mandeha ho azy.
HAFA: Ny tranonkala tsara indrindra hisintonana lalao PC maimaim-poana
Rehefa tsy mampiasa fitaovam-piadiana isan-karazany ianao ao amin'ny Hades, ny controller no vahaolana azo antoka indrindra. Ny hetsika sy ny reflexes dia tena ilaina amin'ny fahavelomana amin'ny lalao Supergiant, ary mitombo ny fahafahan'i Zagreus rehefa mampiasa controller. Soa ihany, Hades dia mahafinaritra na inona na inona fomba fanaraha-maso ampiasainao.
Hafahafa fotsiny ny filalaovana Strider amin'ny klavier sy totozy. Tsy misy fomba hafa hamaritana izany. Ity platformer hetsika mihetsika amin'ny sisiny ity dia natsangana hatrany an-tampon-doha ka hatrany amin'ny lohatenin'ny lohatenin'ny arcade mahazatra an'ny Capcom, ary hita mazava tsara amin'ny lalao. Ny fototra dia mbola milalao, ary midika izany fa tsy maintsy mampiasa controller ianao mba hankafizana azy ireo.
Haingana ny fihazakazahana, ny fitsambikinana ary ny daka ary indraindray dia mitaky reflexes haingana mba hisorohana ny fahasimbana sy/na fahafatesana. Miaraka amin'ny klavier sy totozy, be loatra dia mety ho diso haingana loatra. Ny tsara indrindra dia ny mifikitra amin'ny fanaraha-maso izay ahafahan'ny reflexes sy ny fitadidiana hozatra afaka maharaka ny zava-mitranga eo amin'ny efijery.
14 - Batman: Arkham Series
Na dia azo atao aza ny milalao lalao Arkham amin'ny fampiasana klavier sy totozy (ary tena ara-dalàna izany), dia misy teboka vitsy raha oharina amin'ny mpanara-maso. Ny lalao dia miantehitra mafy amin'ny mekanika mikendry mandeha ho azy, izay mahatonga ny mpanara-maso ho mety amin'ny lalao.
Ny tena hamirapiratra ny controller dia mandritra ny filaharan'ny ady. Ny fikorianan'ny rafitra miady dia mitaky fitadidiana sy reflexes izay tsara indrindra ho an'ireo singa tery amin'ny controller. Sarotra kokoa ny manatratra combos sarotra sy lava miaraka amin'ny klavier sy totozy.
13- Castlevania: Tompon'ny aloka
Ny toetran'ny Tompon'ny Shadow haingana dia midika fa mety kokoa amin'ny fifehezana gamepad izy io noho ny fifehezana ny klavier sy ny totozy. Satria ity dia tsy lalao izay miady amin'ny fitifirana sy mikendry amim-pahamarinana, ny mpilalao dia afaka mijirika sy manapaka amin'ny fialany.
Fanampin'izany, manana tantara lava sy manankarena i Castlevania, indrindra amin'ny fampiononana izay ny mpifehy no fomba filalaovana. Midika izany fa nivoatra be tao ambadik'io fomba io ny franchise, na dia niditra tao amin'ny faritany 3D aza.
12- Halo: Spartan Assault & Spartan Strike
Ny fananana Halo: Ny Master Chief Collection amin'ny PC dia fitahiana, raha toa ka afaka nanararaotra ny combo totozy sy fitendry tiana ny mpilalao. Na izany aza, ny lalao hafa ao amin'ny franchise dia manao tsara kokoa amin'ny controller, anisan'izany ny Spartan Assault and Strike.
HAFA: Lalao tsara indrindra amin'ny Bluestacks Android Emulator: Milalao lalao finday amin'ny PC sy Mac!
Ny fijery isometrika ambony ambany amin'ny lalao dia midika fa tsy ilaina toy ny amin'ny lohateny FPS ny mari-pamantarana. Ny joystick no mekanika tonga lafatra hifehezana ny toetra rehefa manararaotra ny fihetsehana sy ny rafitra fitifirana tena tsara. Na dia tsy zavatra ratsy indrindra eto amin'izao tontolo izao aza ny combo klavier / totozy, dia tsy tsara toy ny gamepad ihany koa.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fampiasana Xbox Remote Play handefasana lalao Windows 10?
11- Lalana Fahatezerana 4
Tsy mahagaga izany. Raha ny marina, ny franchise Streets of Rage dia nipoitra tamin'ny console Sega Genesis 16-bit tamin'ny taona 1990, ary tsy dia nisy lalao ady firy tamin'ny PC tamin'izany fotoana izany. Streets of Rage 4 dia nivadika ho tohin'ny trilogy tany am-boalohany.
Tsy izy ihany fisamborana tonga lafatra ny fahatsapan'ny lalao tany am-boalohany, saingy mampiditra mekanika fanaraha-maso vaovao maro izy io mba hanamafisana ny zava-drehetra. Tsy mahafinaritra ny milalao ny lalao amin'ny klavier, ary tsy tokony ho izany. Ampidiro ny controller ary zahao ny famotehana bokotra mahazatra araka izay nokasaina.
10- Lalao Assassin's Creed rehetra
Ny franchise Assassin's Creed dia tsy fantatra amin'ny endrika fanaraha-maso be pitsiny. Ny klavier sy ny totozy dia tsy takiana amin'ny lalao andian-dahatsoratra toa ny Assassin's Creed. Sady tsy mpitifitra olona voalohany ity no tsy lalao an-tsehatra misy fanaraha-maso sarotra. Ny ady dia mahitsy, ary ny ankamaroan'ny iraka dia misy asa fototra toy ny fihodinana na famonoana. Rehefa avy nanandrana ireo fitaovana roa ireo dia lasa mazava tsara fa ny Assassin's Creed dia milalao tsara indrindra amin'ny controller.
9- Afovoany-tany: aloky ny ady
Amin'ny lalao izay mitaky hetsika mazava tsara mba ho mangina, ny fanaraha-maso dia tokony ho akanjony matanjaka. Mahamenatra fa miteraka olana ny miady amin'olona eo akaikin'ny rindrina fakan-tsary Ny Middle-Earth: Shadow Of War dia tsy dia sarotra noho ny Batman: Arkham Knight, fa sarotra kokoa noho ny Batman: Arkham City.
Raha ajanonantsika ny tanjon'ny arc, dia tsy isalasalana fa mahomby kokoa ho an'ny Middle-Earth: Shadow Of War ny mpanara-maso iray.
Mety hanontany tena hoe inona no fitaovana mety indrindra amin'ny Grand Theft Auto 5, satria miankina amin'ny asa atao. Mba hitifitra sy hitondra fiara miaraka, ny fahatsapana ny fitendry sy ny totozy dia ambony.
Amin'ny lafiny iray, raha mitondra fiara na manidina fiaramanidina ny mpilalao, dia ny gamepad no periferika tsara indrindra ho an'ny GTA 5. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ny controller dia mamely ny klavier sy ny totozy, raha tsy hoe milalao miaraka amin'ny sasany ny mpilalao. Mods.
7- Mitsangàna amin'ny fasana Raider
Ny fampiasana WSAD amin'ny klavier dia kely noho ny fampiasana gamepad hilalao Rise of the Tomb Raider. Ny lalao dia mamela ny mpilalao hanao hetsika fototra ho an'ny lomano, fiakarana rindrina ary mandeha / mihazakazaka. Tsy misy karazana ody na fitaovam-piadiana azo ampiasaina.
Ny fitaovam-piadiana toy ny tsipìka, basy, basy ary poleta dia azo ampiasaina mora foana amin'ny alàlan'ny pad directional (D-Pad). Ny klavier sy ny totozy dia miasa ihany koa, saingy maro amin'ireo mpampiasa no misafidy ny controller noho ny fampiononana sy ny fidirana.
6- fanahy maizina
Amin'ny lalao sarotra toa ny Dark Souls, mila periferika tsara indrindra ianao. Miankina amin'ny fahaizanao mampiasa tsara indrindra, ny Dark Souls dia mety ho tsara indrindra amin'ny klavier sy totozy na gamepad. Tsy a MMORPG izay mitaky hitsin-dàlana na macro. Misy bokotra ampy eo amin'ny controller ahafahanao milalao tsy misy sakantsakana (afa-tsy ny fotoana rehetra hahafatesanao).
Raha toa ianao ka tahaka ny MezzPlays, dia nandresy ny Dark Souls tamin'ny mpifehy Guitar Hero ianao nefa tsy nisy fahasimbana! Aza omena tsiny ny Dark Souls amin'ny mpanara-maso anao, fa ny fahasahiranany.
Azo inoana fa ny ankamaroan'ny lalao video ara-panatanjahantena dia tsara indrindra amin'ny fanaraha-maso. Ny fitendry sy ny totozy dia tsy mety, raha tsy misy olona mahalana no mandray controller. Ny FIFA dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny gamepads sy ny mpanara-maso, fa ny dikan'ny PC an'ny franchise dia matetika tsy mifanaraka mivantana amin'ny DualShock PlayStation.
Vakio ihany koa: Zavatra 6 tokony hatao amin'ny PS4 taloha, Xbox, na console hafa
Raha fintinina, ny FIFA 20 dia tsy mitaky fihetsehan'ny totozy mazava tsara, ary ny fampiasana klavier sy totozy dia mety hahatsapa ho mifanohitra amin'ny intuitive.
Noheverina ho iray amin'ireo lalao 2D henjana indrindra amin'ny tantaran'ny PC, Cuphead mametraka fanamby tena izy noho ny sarimiaina haingana sy ny ady amin'ny lehibeny. Ho gaga ianao amin'ity lalao video hazakazaka sy basy ity aingam-panahy avy amin'ny 193os.
HAFA: Torohevitra sy fika lalao Sims 4, kaody fitaka ho an'ny PC-nao ary maro hafa.
Fantatray fa sarotra ny Cuphead, fa inona no tsara kokoa: klavier sy totozy sa gamepad? Ity lalao ity dia mety ho toa lany andro, saingy mampiasa fanaraha-maso maoderina. Manangana, manangom-bozaka, mihantona eo amin'ny toerany, ary mampiasa Super-Art dia misy bokotra voatendry. Ny fanaraha-maso ny Cuphead dia tsy dia sarotra ary noho izany dia tsy mitaky ny fampiasana klavier sy totozy. Izany rehetra izany dia miankina amin'ny safidy amin'ity lalao ity.
Raha mbola tsy navoaka tamin'ny PC ny Nioh 2, Nioh dia azo jerena amin'ny fivarotana toy ny Steam, Humble Bundle, ary Green Man Gaming. Ity dia lalao filalaovana asa mitaky andraikitra, ary mety hanimba ny fisafidianana ny fitaovana diso.
Ny Nioh dia tsy lalao milalao an-tsehatra misy bokotra be dia be. Azo atao tsara ny milalao miaraka amin'ny gamepad. Mampifandray controller Xbox One na DualShock 4 amin'ny PC-nao ary hihatsara be ny traikefanao.
2 - Hollow Knight
Hollow Knight dia mitovy amin'ny fanahy, Metroid ary Castlevania amin'ny fotoana iray ihany. Tsy mitovy hevitra amin’izay lalao tena mitovy aminy ny olona. Azo antoka fa ny Hollow Knight dia lalao mitaky fitakiana izay tsara indrindra amin'ny gamepad.
Ny klavier sy ny totozy dia tsy manome tombony rehefa milalao Hollow Knight, ka mety hifikitra amin'ny mpanara-maso ihany koa ianao. Mirary soa amin'ny fiezahana handresy ity lalao ity amin'ny fitendry sy totozy; tsy tapa-mofo izany.
1- Mety hitomany ny Devoly 5
Ity lalao ity dia tsy ny sarotra indrindra amin'ity lisitra ity, fa mety manana curve fianarana lava indrindra. Devil May Cry 5 dia tsy mitovy amin'ny lalao Devil May Cry hafa. Ny fanaraha-maso dia samy hafa, saingy iraisan'izy rehetra fa ny controller no safidy tsara indrindra.
Andramo ny mampiasa WSAD setup, dia ho sarotra aminao ny handresy ny monsters. Nandritra izany fotoana izany, Capcom dia nanatsara ny traikefan'ny klavier sy ny totozy hatramin'ny lalao Devil May Cry teo aloha. Na dia eo aza ny zava-drehetra, ny mpanara-maso no safidy tsara indrindra.
mpamoaka lahatsoratra Chez ny remote
Mathilde no tonian-dahatsoratra manokana momba ny zava-drehetra mifandraika amin'ny vaovao Gaming ao amin'ny la-manette.com miorina ao Newfoundland, Canada, mirakitra lalao sy esports isan-karazany. Mathilde dia nandefa sonia tamina toeram-pivarotana maro toa ny G FUEL, NME, Gfinity ary mirehareha amin'ny fitarihana ny fandrakofana ny lalao amin'ny controller. Afaka mifandray amin'i Mathilde ianao amin'ny [email voaaro]
Lahatsoratra farany nataon'i Mathilde Grimard (jereo ny zava-drehetra)
The Seven Deadly Sins: Grand Cross dia miara-miasa amin'ny anime malaza Re:ZERO ho an'ny hetsika crossover. - 15 Janoary 2022
Splatoon 2: toro-hevitra sy fika - ny fomba hilalao an-tserasera miaraka amin'ny namana - 15 Janoary 2022
Minecraft Pocket Edition - Ny Torolàlana Redstone Farany (fitaovana) - 15 Janoary 2022
Ahoana ny fomba hamonoana sy hamonoana ny hafainganam-pandehan'ny fitaovana ao amin'ny Chrome
Attack On Titan: Taona, haavony ary daty nahaterahan'ny mpilalao fototra tsirairay
Moon Knight trailer dia nanambara ny lalao NFL Super Wild Card miaraka amin'ny sary vaovao
Ny alika mahafinaritra an'i Pupperazzi dia hanaraka anao mandra-pahatonga anao ho tia azy ireo
Ny telefaona ambara fa azo aforitra an'i Google dia azo antsoina hoe Pixel Notepad
Apple dia mety hanemotra ny drafitra headset AR / VR hatramin'ny 2023: Bloomberg
Nvidia CFO dia manantena ny hihatsara ny famatsiana GPU amin'ny tapany faharoa amin'ny 2022
The Seven Deadly Sins: Grand Cross dia miara-miasa amin'ny anime malaza Re:ZERO ho an'ny hetsika crossover.
Splatoon 2: toro-hevitra sy fika - ny fomba hilalao an-tserasera miaraka amin'ny namana
Minecraft Pocket Edition - Ny Torolàlana Redstone Farany (fitaovana)
South Park: Mpanimba telefaona - Soso-kevitra & Tricks - Manangana Deck tsara indrindra
Catalog Roblox - singa 10 angano
Kaody fiarovana Star Tower rehetra (Janoary 2022)
Kaody Shindo Life hahazoana spins sy bonus: Janoary 2022
Cookie Run: Fanjakana: Lisitry ny kaody fanavotana
Skip-Bo dia lalao karatra 53 taona, novelomin'i Mattel163 ho an'ny finday.
Mila namana ho an'ny Animal Crossing: New Horizons Multiplayer? Zarao eto ny kaody namanao sy ny kaody Dodo!
Ny lalao adventure 10 tsara indrindra
Ny lalao misokatra 10 tsara indrindra eran-tany
Ny fampidinana eropeana 15 voalohany ao amin'ny Switch eShop ho an'ny volana Desambra 2021.
[Famerenana] Hafahafa ny fiainana: tena loko
Ny fanavaozana ny fampandrosoana Deltarune sy ny fijerena ny toko 2 vaovao dia nambara
Nanambara ho an'ny Switch ny namako Peppa Pig
Ny mpamorona Mario & Luigi dia manazava ny antony tsy misy fanavaozana vaovao amin'ny Switch
Atlus dia tsy nanadino an'i Etrian Odyssey sy ny tetikasa vaovao nambara.
Lasa nomerika kokoa ny lalao agent
Ny lalao PS1 tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra